မြန်းဂလစ် တွေ ဖြစ်ကြတော့မှာလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြန်းဂလစ် တွေ ဖြစ်ကြတော့မှာလား
မြန်းဂလစ် တွေ ဖြစ်ကြတော့မှာလား
Posted by mgwalone on Jan 1, 2013 in Copy/Paste | 17 comments
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာတွေက တိုးတက်၊ ကမ္ဘာကြီးကို ရွာလို့တောင် တင်စား ပြောဆိုနေကြတာဆိုတော့ နိုင်ငံတကာသုံးဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားက အင်မတန် အရေးပါတယ် ဆိုတာ လူတိုင်းက ပြောနေကြပါပြီ။ ဒါကို မောင်ဝလုံး လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဗျာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တော့ နဲနဲ ပိုလွန်းနေသလားလို့ ဒီစာကို ရေးလိုက်တာပါ။
ခေတ်ကပြောင်းလဲတိုးတက်တာ သိပ်မြန်တယ်။ ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းတွေ ကလည်း နေတိုင်းပေါ်။ မောင်ဝလုံးတို့ လိုက်လို့မမီနိုင်လောက်အောင်ကို မြန်နေတာ။ ဒီတော့ ဒီပစ္စည်း အသစ်အဆန်းတွေကို မြန်မာစကားလုံးနဲ့ ခေါ်ဘို့ မရှိတာတွေ များလာပါတယ်။ ဟိုတုန်းက ရေဒီယို ဆိုတာ Radio ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားလုံးရဲ့  အသံထွက်ကို ယူပြီး မွေးစားသုံးရသလိုပါပဲ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကွန်ပြူတာ တို့၊ အီးမေးလ် (e-mail) တို့ ဆိုတာတွေကို အတိအကျ ဘာသာပြန်ပြီး သုံးတာထက် အသံထွက်နဲ့ သုံးလိုက်တာက ပိုအဆင်ပြေနေတာ မောင်ဝလုံး လက်ခံပါတယ်။ ပြောရရင် အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ဖက်ရှင် (Fashion)၊ စတိုင် (style)၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် (Motor Cycle) ဆိုတဲ့ စကားတွေကို ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။ မြန်မာစကားလုံး မရှိဘူး၊ ဘာသာပြန်လို့ မရဘူးလို့ မပြောနိုင်ပေမဲ့ ဒီစကားလုံးတွေကို သုံးလာရင်းနဲ့ မြန်မာမှုပြု မွေးစားလိုက်တာ ဒီနေ့ မှာတော့ မောင်ဝလုံးတို့ရဲ့  မြန်မာအဘိဓာန်မှာတောင် ပါနေပြီလေ။ ဒါက ရှင်သန်နေတဲ့ ဘာသာစကား တစ်ခုအ တွက် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လို့ ပြောရင်ရမယ်ထင်တယ်။ မောင်ဝလုံးက ဘာသာဗေဒ ပညာရှင်မဟုတ်တော့ တတ်သိနားလည်သူများ အမှားပါရင် သင်ပြပေးကြပါဦး။
မောင်ဝလုံး စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေက ဒီဘာသာခြား စကားလုံးတွေကို မြန်မာစကားမှာ ထည့်သုံးနေကြသလဲလို့။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာမှာ လိုအပ်ချက်အရ သုံးတာကို လက်ခံနိုင်ပေမဲ့ မြန်မာစကားလုံး ရှိပါလျက် သူများ စကားကို ယူသုံးနေတာတော့ နားကလောတယ်ဗျ။ “မြန်မာ့အသံ” တဲ့။ “မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြား” တဲ့။ အဲဒီမှာ သတင်းကြေညာတဲ့ သူများကိုက အဲလို ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ မောင်ဝလုံး မှတ်မိတာလေးတစ်ခု၊ နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗန်းရှင်း စင်တာ တဲ့။ အများကြီးဗျာ။ မောင်ဝလုံး အကုန်မမှတ်မိတော့ဘူး။ နောက်ပြီး သူတို့ပြောတဲ့ အမ်အာတီဗီ ဖော ကနေ ပြနေတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ကြည့်။ ကြေညာတဲ့သူတွေ ပြောတာကို အသေအချာ နားထောင်၊ မြန်မာစကားမဟုတ်တာတွေ အတော်ပြောကြတယ်။ ကြည့်နေတဲ့ မြန်မာပရိတ်သတ်ကို စော်ကားနေသလိုပဲ။ အစီအစဉ် အမည်တွေမှာလဲ ဒီအတိုင်းပဲ။ စယ်လဘရစ်တီ တော့ ဆိုလား၊ ဂလုပ်ဘယ် တော့ ဆိုလား၊ ပန်နိုရားမား ဆိုလား၊ မူဗီတော့ ဆိုတာလဲ ရှိသေး။
မြန်မာသတင်းစာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်း။ ဘာတဲ့ အီးစီ အဖွဲ့ဝင်များ တဲ့။ စဉ်းစား လိုက်တော့ နှာခေါင်းပိတ်ရမလိုလို၊ မြန်မာစကားလုံးက ဒီလောက် မဆင်းရဲပါဘူး။ သတင်းစားမှာ ပါတာတွေ အများကြီးဗျ။ မောင်ဝလုံး ပြန်မရှာနိုင်တော့လို့ ဒီလောက်ပဲ ထည့်လိုက်မယ်။ သြော သတိရတာ တစ်ခု ရှိသေးတယ်။ စာစောင်တွေ၊ ဂျာနယ်တွေရဲ့  (မောင်ဝလုံးတောင် ဂျာနယ်ကို သုံးလိုက်မိ) အမည်တွေ ဘယ် လိုပေး ဘယ်လို ရေးနေကြသလဲ။ ကြည့်လိုက်ရင် အများစုက အင်္ဂလိပ်လို စာလုံးကြီးတွေက ပြူးလို့။ အချို့  များဆို မြန်မာအမည်တောင် မရှိဘူး။ ကောင်းကြသေးရဲ့ လားဗျာတို့။
နောက်ပြီးတော့ လုပ်ငန်းအမည်တွေ၊ ဒီနေ့ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး လို မြို့ ကြီးတွေ ကို မဆို ထားနဲ့။ နယ်မြို့ လေးတွေမှာတောင် လုပ်ငန်းအမည်တွေက အင်္ဂလိပ်လိုတွေ ဖြစ်နေကြတယ်။၊ စားသောက်ဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်၊ ကုမ္ပဏီ၊ ဟိုတယ် (အဲ ပါသွားပြန်ပြီ၊ ဒါကတော့ အဘိဓါန်မှာ ပါနေပြီးသား)၊ ၀က်သား ဒုတ်ထိုး ဆိုင်တောင် အင်္ဂလိပ်အမည် တပ်လိုက်သေးတယ်။
မောင်ဝလုံး ကြားဖူးလိုက်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေ အဆင်ပြေအောင် လမ်းနံပါတ် (ဒါလည်း အင်္ဂလိပ်စကားပဲ၊ အဘိဓါန်မှာ ပါနေလို့ သုံးလိုက်တယ်နော်) တွေကို အင်္ဂလိပ်လို ရေးကြ ပါတဲ့။ အခုတော့ဗျာ အကုန်ကို လိုက်ရေးနေကြသလားပါပဲ။ မြန်မာအမည်ကို မရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အများကြီး။ ကဲ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ။ ဘာတွေ မှားနေလဲ။
မောင်ဝလုံး သူများက ပိုက်ဆံပေးလို့ နိုင်ငံခြားရောက်ဖူးတယ်။ သူတို့ဆီမှာ သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား နှစ်ခုလုံးကို ဆိုင်းဘုတ် (လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ) မှာ ရေးကြတယ်ဗျ။ မောင်ဝလုံးတို့ ဆီမှာ မြန်မာလို လုံးဝမပါတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ အများသား။ နိုင်ငံမှား ရောက်လာသလားဆိုတာ ကိုင်ဇာဆိုတဲ့ သီချင်းတဲမှ ပါတယ်နော။ သိပ်လှတဲ မမကို မြင်ရလို့ သူမှားသွားလားလို့ ဆိုတာ။ မောင်ဝလုံးတို့ ဆီမှာလဲ စာတွေက အင်္ဂလိပ်လိုတွေ ရေး၊ ပြောတော့လဲ အင်္ဂလိပ်လို ဟိုလိုလို၊ ဒီလိုလို (ကိုရီးယားတွေ တရုတ်တွေ ပါ ရောလာတာကို ပြောတာပါ) အဲ ၀တ်တာဆင်တာတွေကလဲ ပြောင်းဆိုတော့ အင်း နောက်ကြရင် မြန်မာလို့ မရေးတော့၊ မပြောတော့ပဲ မြန်းဂလစ် တွေ ဖြစ်ကြတော့မှာလားပဲ။
မြန်မာစာသည် တို့စာ၊ မြန်မာစကားသည် တို့စကား၊ တို့စာကို ချစ်ပါ။ တို့စကားကို လေးစားပါ။ သခင်မျိုးဟေ့ တို့မြန်မာ (ဗမာ လို့ ဆိုချင်သူများလည်း ဆိုကြပါဗျာ)
မြန်မာစကားကို လေးစားပါတယ် …
မြန်မာစာကို ချစ်တယ် ….
မြန်မာ စကားဟာ ကျုပ်တို့ စကား၊ ကျုပ်တို့ စာပါပဲ ….။
သို့ပေမယ့် ဆိုတာလေးကို နားလည်မိပါတယ်။
ကျွန်တော် စာရေးဆရာတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖူးတယ်ဗျ။ ဆရာတို့ကတော့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး တို့၊ လိုအပ်ချက်တွေတို့ ရေးလိုက်တာ။ ဘာမှလဲ ဖြစ်မလာတော့ ဘယ်လို ခံစားရသလဲ လို့ မေးဘူးတယ်။
သူ့အဖြေက ရေးလိုက်၊ ဖေါ်ထုတ်လိုက်ရတာကို ပဲ ခံစားပါတယ်တဲ့။ ဒီရေအကျမှာ ကမ်းပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကြယ်ငါးတွေထဲက တစ်ကောင်လောက် ပင်လယ်တဲ ပြန်လွှင့်ပစ်လိုက်တာမျိုးပါ တဲ့။ အဲဒီ ပင်လယ်ထဲကို ပြန်ရောက်သွားတဲ့ ကြယ်ငါးလေးကတော့ အသက်ရှင်တာပေါ့ လို့ ဆိုပါတယ်။
once, Lu Htu Daw Ahmar sadly said that.
our Myanmar people are throwing away what they already own.
ကျုပ်တို့ဆီက အင်္ဂလိပ်သတင်းစာတွေမှာလည်း Amyotha Hluttaw , Pyuthu Hluttaw ဆိုတာမျိုးတွေ
ရေးနေတာတွေ့တယ်၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ တွေကိုတော့ Speaker လို့သုံးတယ်၊ဘာလို့ Oakkahta လို့မသုံးတာလဲမသိဘူး၊ နောက်ဆို Thamada ဆိုတာမျိုးတွေလုပ်ဦးမလားမသိဘူးဗျာ၊ဘာသာစကားအသုံး
ဘာသာစကားဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မိမိပြောလို သိစေလိုတဲ့ အရာကို သိရှိအောင်ပြုလုပ်တဲ့
ကြားခံဆက်သွယ်မှု့တစ်ခုပါဘဲ။ အဲဒီတော့ ကိုယ်ပြောမယ့် သိစေလိုတဲ့ တဖက်သူပေါ်မူတည်ပြီး အလွယ်ဆုံး သူသိအောင်ပြောရင် အဆင်ပြေ မြန်ဆန်စွာ နားလည်သွားနိုင်တာမို့ ဘယ်ဘာသာမှာ ဘဲဖြစ်ဖြစ် မွေးစား စကားလုံးတွေဟာ ရှိတတ်စမြဲပါဘဲ။ ကာလ ဒေသ လိုက်စွာသုံးနှုန်းရတာမျိုးလည်း ရှိတာပေါဗျာ။
ကျွန်တော်အယူအဆကတော့ ကိုယ်ပြောလိုတာ သူနားလည်ဖို့ အဓိကဘဲထင်မိပါတယ်။
မောင်ဝလုံုးဒါကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများပြည်သူ (အင်္ဂလိပ်စာ တတ်သူကော၊ မတတ်သူပါ) ကြည့်ကြ၊ ဖတ်ကြ၊ နားထောင်ကြတဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယို၊ သတင်းစာ လို နေရာတွေမှာ မြန်မာစကားလုံး ရှိပါလျက်နဲ့ ဘာသာခြားစကားလုံးတွေကို လှိုင်လှိုင်ကြီး သုံးနေတာကို ဆိုလိုတာပါ။
ဒီနေရာမှာ ကိုခင်ခ ပြောသလို ကာလ၊ ဒေသ ဆိုတာကို ပြောရမှာပါပဲ။ ပညာရှင်တွေ လုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးပွဲတစ်ခုမှာ ပြောတာနဲ့ အများပြည်သူအတွက် သတင်းအဖြစ် ရေးတဲ့ အခါ မတူနိုင်ပါဘူး။ ဆွေးနွေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မောင်ဝလုံး ပြောတဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယို၊ သတင်းစာ လို နေရာတွေ မှာ မြန်မာစကားလုံး ရှိပါလျက်နဲ့ ဘာသာခြားစကားလုံးတွေကို လှိုင်လှိုင်ကြီး သုံးနေတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဆိုတာလည်း ကိုယ်ပြောလိုတာ သူနားလည်ဖို့ ရည်ညွှန်းရေးနိုင် ပြောနိုင်ရင်
ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ဆောင်းပါး သတင်းတစ်ခုမှာ ရည်ရွယ်ထိုးဖောက်လိုတဲ့ လူတန်းစားနဲ့ ကိုက်ညီအောင်ပြောတတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာ။
မြန်မာစာလည်း ဘာတွေဖြစ်နေလဲ မသိတော့ပါဝူး..မွေးစားရင်လည်း မွေးစားတာမှန်းသိအောင် မွေးစားရင်းတော်သေးတာပေါ့…ဘာတဲ့..မဂ္ဂဇင်း တဲ့…ကုမ္ပဏီ တဲ့..အစက ပါဠိစာလုံးတွေမှတ်လို့…
ဆယ်တန်းက စာတစ်ပုဒ်မှာ ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်က ပြောဖူးပါတယ်… မြန်မာစကားပြေခေတ်နောက်ကျခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့…သမ္မာကျမ်းစာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့ကြသလို ရှေးတုန်းကသာ ပိဋကတ်သုံးပုံကို မြန်မာပြန်ခဲ့ရင် အခုချိန်မှာ မြန်မာစကားပြေက ဒီထက်ပိုထွန်းကားနေမှာပါတဲ့…
ဆရာကြီးမသိသွားတာက အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဆက်လက်ထွန်းကားအောင် လုပ်ဖို့နေနေသာသာ ရှိပြီးသားမြန်မာစကားပြေတွေတောင် ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ်ဆိုတာပါပဲ…
မြန်မာပြည် ဖစ်ဖစ် ဘာပြည်ဖစ်ဖစ် ကမ္ဘာသုံးဖစ်တဲ့ အင်းဂလိပ်စကား၊ အင်းဂလိပ်စာနဲ့
Used To ဖစ်တာကောင်းပါတယ်။
သို့သော် ဆိုလိုရင်းနားမလည်ဘဲ ဘဇပ်ထဲတင် Used To ဖစ်နေတာတော့ ဆိုးတယ်ဗျာ။
အခု ကျနော်ပြောနေတဲ့ used to မှာတောင် ဂရမ်မာသဘောအရပြန်ကြည့်ရင် အသုံးနှုန်းမှန်ရဲ့လားမသေချာဝူး။ used to ဖြစ်ပုံများပြောပါတယ်။ ဟိ။
ပို့စ်ထဲမာပါတဲ့ မြန်းဂလစ်ကိတ်စကတော့ ချောက်ထဲခုန်ဆင်းနေကျတယ်လို့မြင်တာဘဲ။
ဗမာလိုတိတိကျကျမပြောချင် အင်းဂလိပ်လို တိတိကျကျပြောပေါ့ဗျာ။ မတတ်လို့ရောပျောရာကနေ
ကိုယ်ပိုင်လို့ထင်သွားရင် next generation အတွက်ဘာသာစကားအသစ်တခုတိုးတော့မယ်။
ဆိုးတာတခုရှိသေးတယ်။ ဖက်ရှင်ဆိုင်တေ စားသောက်ဆိုင်ရီးတေမှာ အင်းဂလိပ်လို ဆိုင်းဘုတ်ရီးတေ ဟီးနေအောင် တပ်ထားပီး လမ်းနံမယ်နဲ့ ရှာမယ်လဲလုပ်ရော ဗမာလိုတောင်ဆိုင်းဘုတ်မချိတ်ထားတဲ့ လမ်းမျိုးဖစ်နေရင် သေတာဘဲ။ အူးမိုက်ပျောသလိုဘဲ ပျောလိုက်မယ် … ဟာသတေပါဗျာ…..
အဲဒါတွေထဲ.. ခတဂနက..အင်္ဂလိပ်အသံထွက်ကို.. တိုက်ရိုက်.. ဂျပန်လိုအသံနဲ့ရေးတာပါပဲ..
ပါဠိဆိုတာ.. ကိုယ့်ဘာသာစကားတော့လည်း.. မဟုတ်ပါဘူး..။
ဆိုတာ.. အရင်က.. မန္တလေးဂဇက်ဆောင်ပုဒ်တောင်လုပ်ပြီး… ထားခဲ့သေးတယ်..
နောက်တော့.. တခြား..မြန်မာတိုင်းရင်းသားစာတွေ Respect ပေးချင်တာနဲ့.. ဖြုတ်လိုက်တာ..
ဒီရွာမှာက လူကြီးသူမပေါတော့ ဆောင်းပါးမရေးဝံ့တာကြောင့်ပါ။
အန်ထော်ပရက်ညော်ရှစ် ကို စွန့်ဦးတီထွင်လို့ပြန်သတဲ့
အဲ့သည်လို ဘာသာပြန်စာလုံးပေါင်း တနှစ် ဘယ်နှလုံးထွက်လဲ ကိုရင်သိလားဗျ.
သိပ္ပံနယ်ပယ်ထဲမတော့. စာလုံးသစ်တွေက မိနစ်တိုင်းပေါ်နေတာပါပဲ
ဆိုတော့. လိုအပ်လို့ပေါ်လာတယ် သုံးနေရ သုံးနေကြတယ်ပဲ မှတ်ပါကွယ်.
ပြောဖူးတဲ့ စကားဟောင်းလေး ပြန်ပြောလိုက်ပါအုံးမယ်
Strategic Human Resource Management ကို မြန်မာလို ဘယ်လိုခေါ်သတုံးဗျ.
ဗျူ မြောက်လူ့ ရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲ
ဗျူလူ့ ရင်းမြစ် စီမံ
ဗျူလူ့စီမံ
We can do this…..if every Myanmar people used.
ဒဂလ ….. ဒဂလ …….
တစ်ခါတစ်လေကျတော့လဲ အဲဒီစကားလုံးတွေတွေကို အမြဲနားဝင်နေတော့ မစိမ်းတော့ ဘူးပေါ့ဗျာ
မြန်မာစကားမှာ အင်္ဂလိပ်မွေးစားစကားတွေအများကြီးပါတာက ကိုလိုနီခေတ်ကြောင့် လို့ထင်တာပဲ။ ဟိုတလောကမှ သတိထားမိတာတခုက ဆိုက်ကား ဆိုတာ sidecar ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားက မွေးစားထားတာတဲ့။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မွေးစားစကားတွေမရှိအောင် ရှိသမျှ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကို ထိုင်းဘာသာစာလုံးထွင်တဲ့ ကော်မတီ သပ်သပ်တခုရှိတယ်တဲ့။ အင်တာနက်တို့ ဖုန်းတို့လို နည်းပညာစာလုံးတွေကအစ ပီဇာတို့ ပန်ကိတ်တို့ စူရှီတို့အဆုံး တခြားဘာသာစကားတွေ အကုန်လုံးကို ထိုင်းစာလုံးထွင်ပြီး သတင်းတွေ ဖတ်စာအုပ်တွေမှာ သုံးခိုင်းကြတယ်တဲ့။ အဲဒီ ကော်မတီက အလုပ်တွေအမြဲပြည့်နေမှာသေချာတယ်။ ဒါကြောင့် ယိုးဒယားလူမျိုးတွေစကားပြောနေရင် အင်္ဂလိပ်စာလုံးမပါသလောက်မို့ အကြောင်းအရာခန့်မှန်းရ သိပ်မလွယ်လှဘူး။ ဒါကတော့ ဟိုဘက်တဖက်စွန်းရောက်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘာသာစကားထိန်းဖို့ဆိုရင် အတော်တော့ ထိရောက်တယ်။
လာအိုတွေက superman ကို လာအိုမှု ပြုပြီး လာအိုစကားထွင်လိုက်တော့ အဓိပ္ဗါယ်ကအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြန်ရရင် ”The flying man in tight, red underwear” တဲ့။ ကောင်းရော။
အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတိုင်းကို ဗမာမှု ပြုဖို့မလိုပါဘူး။ မြန်မာမှုပြုလို့ရတဲ့ စာလုံးတွေကိုသာ အလွယ်တကူ မမွေးစားလိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ဗမာလိုပြန်လို့လွယ်တာတွေတောင် အင်္ဂလိပ်လိုဘဲ အလွယ်ယူသုံးလိုက်တာတော့ ကြေက်စရာပဲ။ ဘာတဲ့ လူမျိုးကို စကားဝါးသွားမယ်ဆိုလား။
အဘိဓာန်ထဲ မှာ မွေးစားစာလုံးတွေကို ထည့်မယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး မွေးစားစာလုံးလို့ လူသိအောင် ရေးပေးထားရင် တဖြည်းဖြည်း စကားတွေရောမွှေဖြစ်သွားတာ နည်းနည်းနှေးမယ်ထင်တယ်။
စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဆွေးနွေးကြသူများ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
ခရီးထွက် ၊ အလုပ်ရှုပ်နေတာကြောင့် ပြန်လည်မဆွေးနွေးနိုင်ပဲ ဖြစ်ရတာ တောင်းပန်ပါတယ်။
ကိုခင်ခ ပြောတဲ့ ရည်ရွယ်သူ ပရိတ်သတ်ကို လိုက်လို့ သုံးသင့်တယ် ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်၊ ဒါမှမဟုတ် စာတမ်းတစ်ခုမှာ မျိုးပေါ့ဗျာ။ သုံးသင့်ပါတယ်။ သုံးရမှာပါ။ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ နားလည်နိုင်သလို အချို့ သော စကားလုံးများ၊ အသုံးအနှုန်းများကလည်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောလိုက်မှ ပိုမိုနားလည် လွယ်တာမျိုး တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုဂီ ပြောသလို အသစ်အဆန်းတွေက အချိန်နဲ့ အမျှ ပေါ်နေတာဆိုတော့ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန် ရေးဖို့ဆိုတာ အမြဲတန်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ မွေးစားတယ်ဆိုတာက ဖြစ်လာမှာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက မြန်မာတွေကိုယ်တိုင်က မြန်မာစကားကို နေရာမပေးတော့တာ၊ မလေးစား တာတွေကို ပါ။
ဆိုင်အမည်။ မြန်မာလို ထုတ်တဲ့ မြန်မာတွေဖတ်တဲ့ စာစောင်အမည်တွေ အင်္ဂလိပ်လို ဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ရုပ်မြင်သံကြားက အစီအစဉ်တင်ဆက်သူများ၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းကြသူများ အင်္ဂလိပ်စကားတွေ ဘာလို့ လှိုင်လှိုင်ကြီးသုံးနေကြတာလဲ။ (ဆေးပညာတို့ ကွန်ပြူတာအကြောင်းတို့ ဆွေးနွေးရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့)
ဒီစာရေးနေရင်း ရုပ်မြင်သံကြားက ဆွေးနွေးခန်းလေးကို နားထောင်လိုက်မိပါတယ်။
အမတို့ ဒီဇိုင်းနာတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မူပိုင်ခွင့်လေးရှိရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဘရန်းတစ်ခု ပေါက်သွားတာနဲ့ ကော်ပီကူးကြတာဆိုတော့ အပင်ပန်းခံပြီး တီထွင်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်နာတွေအတွက် နစ်နာတောပေါ့။
ကြားလိုက်သေးတယ်။ မော်ဒယ် လောကတဲ့ ၊